Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Trading, Distribution, Import, Export အလုပ်အကိုင်များ
ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေး, ရောင်းဝယ်ရေး, ပို့ကုန်, သွင်းကုန် Jobs in Myanmar
ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေး, ရောင်းဝယ်ရေး, ပို့ကုန်, သွင်းကုန် အလုပ် 168 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေး, ရောင်းဝယ်ရေး, ပို့ကုန်, သွင်းကုန် ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Recruiter active 45 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
အကောင့်အစုံအလင်ကို ကိုင်တွယ်ပြီး အကောင့်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပိတ်သိမ်းရန် သေချာစေရန်၊ စာရင်းသွင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ခရက်ဒစ်မှတ်စုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ပုံစံများအားလုံးကို မှန်ကန်တိကျစွာ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အကောင့်စနစ်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းကုဒ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ စာရွက်စာတမ်းများပါသော ကုန်ကျစရိတ်များ ငွေလွှဲခြင်းများမှတ်တမ်းမျာ နှင့်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် စစ်ဆေးခြင်း အရောင်းပြေစာအား ပြင်ဆင်ပြီး ပေးပို့မှုအားလုံးကို မှန်ကန်သော ပမာဏနှင့် ယူနစ်စျေးနှုန်းဖြင့် တောင်းခံထားသည်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် အရောင်းဒေတာထည့်သွင်းမှုကို အကောင့်များလက်ခံနိုင်သော (AR) မော်ဂျူးတွင် ထည့်သွင်းပါ။ GL သို့မတင်မီ အရောင်းပြေစာများအားလုံး မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာစေရန် အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ၀င်သော စာရွက်စာတမ်းများ စာရိုက်ခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်းနှင့် လချူပ်စာရင်းများပြုလုပ်ခြင်း စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ AR၊ PR အပါအဝင် လစဉ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်ပါ။ အကောင့်အချက်အလက်ကို အစီရင်ခံခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အကျဉ်းချုံ့ခြင်း။ (နေ့စဉ်) ငွေသားစာအုပ်များနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း မှန်ကန်ပြီး ပြည့်စုံသော စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် အကောင့်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများသည် အချိန်တိုင်း တိကျမှန်ကန်ကြောင်း သေချာရမည် လစဉ် အရောင်းပစ်မှတ်ကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် မတူညီသော အရောင်းလမ်းကြောင်းများအတွက် ကော်မရှင်ခများ။ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ခြင်း အထွေထွေစာရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲပြီး လကုန်နှင့်နှစ်ကုန် အနီးကပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ အခြားတာဝန်များ၊ တာဝန်များနှင့် အရည်အချင်းများကို လိုအပ်သလို လိုအပ်သလို တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြနိုင်စေရန် စီမံပါ။
- စာရင်းပိုင်း နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ (LCCI level I,II အောင်မြင်ပြီးသူဦးစားပေးမည်) -Computer (Microsoft word,excel,internet &email)အသုံးပြုနိုင်သူ -Teamwork ဖြင့် ညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ - အသက် ၂၂ -၂၈ ကြားဖြစ်ရမည်
Shift In Charge-CT&CFS Maintenance (Port Terminal)
Operation Department အတွက် အောက်ပါပစ္စည်းများ အချိန်တိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ၁။ Rail Mounted Quay Cranes ၂။ Compact Sub stations ၃။ RCMS ၄။ RST, ECH and supporting equipments ၅။ E-RTGs ၆။ LT Bus Bars ၇။ CY, Gate Area and supporting assets KPI သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Installation downtime အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက် System များအားလုံးနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို အချိန်ဇယားအတိုင်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်သိမ်းမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လူနှင့်စက်များ ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်နှင့် Store Department မှ စက်ပစ္စည်းများကို Inventory စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ ဤရာထူးသည် အထက်ဖော်ပြပါစနစ်အား ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိရှိစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံးကို စီစစ်နိုင်ရမည်။ အခြားဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး Internal Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များကို ချမှတ်ပြီး အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ Container Terminal နှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းပညာသင်တန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို သေချာစွာလေ့လာသုံးသပ်၍ တိုးတက်မှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ Performance Reviews များကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင် ပြုလုပ်ပြီးအစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ရမည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်ရရှိစေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ၊ ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးစံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Section များအားလုံး၏ အဆိုင်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် Terminal operation များ အဆင်ပြေစွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် ဝန်ထမ်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်နိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ Section တွင် မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုများအားလုံးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းများကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ထားရှိရမည်။
ဆိပ်ကမ်းလုပ်သား | Port Operations
- Container Port လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ - တာဝန်ကျမန်နေဂျာနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - အလုပ်သမားများကို စီမံနိုင်ရမည်။ - စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်များကို နားလည်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - ဘောနပ်စ် - သင်တန်း - Uniform
• potential vendors များကို ရှာခြင်း။ • Suppliers များထံမှ Offers များကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး အကဲဖြတ်ခြင်း။ • Agreement contractပါ စည်းကမ်းချက်များ နှင့် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းခြင်း။ • Orderများကို အချိန်မီ ပေးပို့ခြင်း။ • ဝယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ • Internal database ထဲသို့ မှာယူမှုအသေးစိတ်များ (ဥပမာ ရောင်းချသူများ၊ အရေအတွက်၊ ဈေးနှုန်းများ) ကို ထည့်သွင်းခြင်း။ • ဝယ်ယူထားသော ထုတ်ကုန်များ၊ ပေးပို့မှုအချက်အလက်နှင့် ပြေစာများ၏ Updateမှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။ • Cost Analyses အပါအဝင် ဝယ်ယူမှုများဆိုင်ရာ reportများကို ပြင်ဆင်ခြင်း။ • Stock levelsများကို စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို မှာယူခြင်း။ • သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုဖြစ်စေရန် ဂိုဒေါင်ဝန်ထမ်းများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း။ • စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် up-to-date ဖြစ်နေရန် ကုန်စည်ပြပွဲများနှင့် ပြပွဲများကို တက်ရောက်ခြင်း။
-အလှကုန် အရောင်းအဝယ် အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ -အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ -ရန်ကုန်မြို့ ရှိ City Mart နှင့် Supermarket များ သို့ သွားရောက် အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။ -ရေရှည် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ -ဆိုင်မှ သတ်မှတ်ပေးသော အချိန်များအတိုင်း ဆင်းနိုင်ရမည်။ -အရောင်း Target များအား ပြည့်မှီအောင်ရောချပေးနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Target ပြည့်ပါက ကော်မရှင်ရမည်။ အရောင်း သင်တန်း ပေးမည်။ Uniform ရှိသည်။
Nilar Frozen Co. Ltd.
- ဘွိုင်လာလည်ပတ်မှုအစီရင်ခံစာ (၁) မှ (၁၀) နှင့် ဘွိုင်လာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီရင်ခံစာ (၁) မှ (၁၄) အရ နေ့စဉ်စစ်ဆေးရမည်။ - စက်ရုံရှိ production facilitiesအတွက် လိုအပ်သော ရေနွေးငွေ့ ပံ့ပိုးပေးခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ - Boiler Lines များကို နေ့စဉ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ - ဘွိုင်လာအတွက် နေ့စဥ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို စာရင်းပြုစုရမည်။. - Maintenance of Boiler related components and steam pipeline, and preparing if necessary. - Checking the operation of the pump to keep the boiler water running smoothly. - Assisting M&E operation when staffs needed. - Monthly Boiler Services to be serviced by Boiler Team and M&E Team. - Reporting to the related HOD immediately when there is any errors concern with boiler and steam pipeline accidents matters.
Zay Cho Lay
• အသားငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။ • အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
• Bar menu ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး bar ဆိုင်ရာ stock နှင့် equipment များ ကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။
- Photoshop ဖြင့်ပုံများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ - ရုံးစာချုပ်၊စာတမ်းများ ရိုက်နိုင်ရမည်။